Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ihe na China ihe nkwalite eletriki kọfị kọfị ọhụrụ Trimill
Gịnị mere igwe grinder ji dị mkpa?
Enwere ihe abụọ: ịdị ọhụrụ na mmịpụta.
Ọ bụrụgodi na etinyere ntụ ntụ kọfị ị zụrụ na nitrogen, ozugbo ị mepere akara ahụ, ọ ga -amalite ịbụ oxidized. A na -eghe kọfị ma kewaa ya n'ime iko. Mgbe ichere maka ọkara otu awa, ghaa kọfị ọhụrụ maka ntụnyere. Ọdịiche dị n'etiti ha abụọ ga -awụ gị akpata oyi: Mgbe naanị nkeji iri atọ gasịrị, isi nke kọfị mbụ apụla n'anya nke ukwuu.
Ngwakọta nke isi na ụtọ bụ ụtọ kọfị zuru oke. Nke a bụ ihe kpatara nri ga -eji daa mgbe ị na -arịa ọrịa. A ga-atụfu ísì ntụ ntụ kọfị tupu ala, enweghị "ume".
Ma ị masịrị agwa kọfị miri emi ma ọ bụ nke dị ọkụ, ma ọ bụ na -eji nrụgide ma ọ bụ ihe na -agbaze mmiri, itinye ego na ezigbo Burr set grinder bụ ụzọ kachasị mfe iji melite ogo kọfị gị.
Igwe nri kọfị "Trimill" na -abịa!
Ezigbo igwe kọfị eletriki nwere aka nwere ike gboo mkpa gị kwa ụbọchị maka kọfị, chekwaa oge na mbọ, yana nwekwara ike wepụ kọfị nke ụtọ dị iche iche. N'otu oge ahụ, ọ na -ebugharị. Ị nwere ike ịme iko kọfị n'onwe gị mgbe ị na -eme njem ma ọ bụ na njem azụmahịa. Akụkụ bụ isi nke ezigbo igwe kọfị bụ ịdị mma na ịdị n'otu nke igwe nri. Ụlọ ọrụ anyị ewepụtala igwe kọfị eletriki eji aka eme. Ọ na -eji isi seramiiki a rụpụtara ọhụrụ nwere usoro nwere ezi uche ma nwee ike igwu ya nke ọma na nha. Ntụ ntụ ahụ “pụtara ìhè” n'etiti ihe igwe kọfị. Igwe kọfị anyị agabigala ọtụtụ ule, enwere ike ijide n'aka na ngwaahịa dị mma.
Ezigbo kọfị, ị kwesịrị ya!
Nke gara aga: Mkpa Nnu na Nri ose
Osote: Igwe anaghị agba nchara na -agbanwe agbanwe akwụkwọ ntuziaka kọfị kọfị
Automatic Burr kọfị grinder
Burr Blade kọfị kọfị
Aka seramiiki kọfị
Eletriki Ceramic Burr kọfị kọfị
Igwe ihe kọfị kọfị
Aka igwe kọfị grinder